Mgbe ụfọdụ, m na-eme onwe m ọchị! | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ, m na-eme onwe m ọchị!
Sọnde, Septemba 3, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Aghaghị m ịgwa gị ndị mmadụ… Echere m post ikpeazụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị fun m na mgbe m dere. Dị ka gị kwesịrị lee foto m na isi okwu, a naghị m ewere onwe m ka ihe dị mkpa. Ọzọkwa, n’oge gara aga, edere m ntakịrị edemede banyere ihe m na-eche banyere ịgbagha ihe ịga nke ọma gị n’ihe ndị ọzọ na-ekwu gbasara gị. Enweghi ike ịtụle ihe ịga nke ọma nke blog na mpụga, naanị gị!
Na nke a, ekwesịrị m ikwenye na m jidere gị niile. Achọrọ m ịhụ mmeghachi omume nke ndị na - agụ akwụkwọ m the na blogosphere… mgbe edere m aha m dị oke egwu na -my blog dị mma karịa blog gị'. Ọ bụ asụsụ kpamkpam na ntì, ma aghaghị m ịhụ mmeghachi omume. Ọ bụ nnọọ ihe ọchị! (Biko… M na-ekwe nkwa na m na-achị gị ọchị, ọ bụghị gị!). Fọdụ ndị folks na-ewute m, ụfọdụ na-agba m ume, ụfọdụ wee jiri ọkwa ha tụnyere ọkwa m, ụfọdụ gosipụtara na ogo enweghị ihe jikọrọ ya na otu blog si dị mma.
Achọrọ m ịdị nkọ mgbe ụfọdụ ịhụ na mmeghachi omume are na-akpali ite ka ha na-ekwu. Ikekwe akụkụ kachasị mma nke a (enwere m olileanya na ọ bụghị naanị m na-atụ ụjọ), bụ na ewu ewu nke ntinye a kpaliri m # 70,178 na ọkwa Technorati.
Yabụ, dị ka onye na-ere ahịa, echere m na ọ na-ezo aka na ihe di na nwunye.
Chris Baggott otu oge gwara m na oge ụfọdụ ọ dị mma ịnọ n'etiti esemokwu ma kpasuo nzaghachi nwere ike inye aka na atụmatụ ụlọ ọrụ. Ọ pụtaghị ịmegharị… ọ pụtara na ọ na-eweta ohere iji gosipụta ihe gị. N'ihe atụ a, echere m na ọ bara uru!
Mgbe ụfọdụ, nanị ịsị na ị dị mkpa karịa etu ị dị n'ezie nwere ike ịrụ ọrụ. Nke ahụ, ma eleghị anya, bụ eziokwu dị mwute na anyị nwere ike iji ahịa rụọ ọrụ. Nọgide na-ekwu na ị bụ # 1 ma eleghị anya otu ụbọchị ị ga-abụ!
Eleghi anya n'ime ọnwa ole na ole, m ga-eme mwakpo nzuzo ma kwuo na m bụ blog # 1 na Ahịa akpaaka ma hụ ebe ọ na-enweta m. Ka ọ dị ugbu a, enwere m obi ụtọ na ahapụghị m onye ọ bụla n'ime m na ntinye ikpeazụ m!
My blog dị mma karịa 99.86% nke blọọgụ ndị ọzọ niile!
Onye duru agụ iyi, Steve Irwin gburu na 44